Kismaayo News » Dr. Saacid oo hadal ku saaciday Kismaayo
Dr. Saacid oo hadal ku saaciday Kismaayo
Kn:Wax u muuqda hadalkii ugu dublumaasisanaa, ugu asluubaysnaa, uguna mudnaa ee ka soo yeera masuuliyiinta Dawladda Soomaaliya ayaa Ra’iisul wasaaraha dalka Saacid Shirdoon ayaa markii ugu horaysay jabiyay bukurtii xaqiraadda ee ku waajahan ciidamada huwanta ee gacanta ku haya Kismaayo.
Ciidamada qalabka sida ee amniga iyo kala danbaynta ku soo celiyay ayuu Saacid u soo jeediyay amaan aan lasoo koobi karin, asagoo ka dhawaajiyay inay marxalado qalafsan ayagoo ku sugan u dhabar adeygeen inay meelo badan oo gobolka ah ka sifeeyaan Alshabaab, ayagoon waliba wax kaalmo ah ka helaynin dawladda dhexe ee dalka.
Shacabka Sharafta leh ayuu ku amaanay sidii ay oola shaqeeyeen ciidamada qalabka sida, oogana horyimaadeen qolyihii afka duubnaa ee banaanka laga soo xawilay. Wuxuu ka dhawaajiyay inay qorshaynayaan inay wafti heersare ah u diraan Kismaayo.
Ayadoo baryihii ugu danbaysay ay soo badanayeen hadalo aan waaqici ahayn arimaha murugsan ee Soomaaliyana inay ooga sii daraan mooyaane aan wax kale soo kordhinayn oo ay ka soo burqanaysay madaxda dawladda ayaa markani waxaa furka tuuray Ra’iisul wasaaraha dalka Dr. Saacid Shirdoon oo u muuqda masuul diyaar u ah in khilaafka bulshada loo xaliyo qaab cilmi ku dhisan.
Sadex arimood oo muhiim ah ayay xambaarsanaayeen hadalada Saacid,
1. Qiritaanka mudnaanta ay leeyihiin ciidamada gacanta ku haaya Kismaayo iyo guud ahaan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo.
2. Qiritaanka doorka dawladda ee ka maran iyo daayacaadda loo gaystay ciidamada sadexda gobol ka hawlgalaya.
3. Iyo u diyaar ahaanshaha, ama garwaaqsiga in arimaha xasasiga ay u baahanyihiin in si cilmi ku salaysan looga xaajoodo ee mindi mindi ku taag aysan shaqaynaynin.